Xertii Cabdi ee Minneapolis kusugnayd oo xaalku ku xunyahay!!! | ogaden24
Xertii Cabdi ee Minneapolis kusugnayd oo xaalku ku xunyahay!!!
Qolyihii Cabdi iley usoo direy Mareykanka si ay Xaflado Dhaanto iyo Niiko ah ugu qabtaan madaxda Federaalka Ethiopia-na utusaan cajaladda una yidhaahaan dadkii waa na taageersanyahay ayaa Xafladii wax uyimaada la’a. Qoladan oo lacago badan iyo balanqaadyo been ah dadbadani ugu tageen labadii xafladood ee hore ayaa tan dadkii kasii jeedsadeen.
Waxey horaan dadbadan oo eheladooduu xidhanyihiin ubalanqaadeen in lasii daynayo eheladooda haddi ay kasoo qeyb galaan xadladahan taasoo aan meeshiiba laga qaadin, waliba ay telefoonadii ka dansadeen ama ku damiyeen markey xafladihii dhamaadeen ayakoo islahaa iska noqda laakiin Cabdi iley ku qasbay inay midkale dhigaan taasoo wajigabax ku noqotey oo dadkii ay telefoonada ku damiyeen si ay ula hadla,aan ay garan la’yihiin.
Waxay hadda alifeen laba beenood: midda kawbaad Cabdi iley ayaa imaanaya ee kaalaya ayeey dadka ku leeyihiin waana been, midda labaad waxay suuqa gashadeen in Cabdi la heshiiyey dhalinyaradii la shaqeyn jirtey ee 2014 isku dhaceen haddana Addis Ababa kusugan, ayakoo suuqa la wareegaya Ogaadeen waa heshiiyey mucaarid iyo muxaafid reer hebel ayaana kursigeena duulimaad ku ah ee aan difaacanno.
Labaduba waa been cad aniga ayaan soo xaqiijiyey ee haddii aad tumashada ka qeyb qaadan sidaada uga qeyb qaado laakiin yaan laguu sheegin been qayaxan. Ragga Addis jooga waxaa ka go’an inay daalimkan dadka dhaafiyaan, Waligoodna la heshiin mahayaan sida maanta ay sheegeen. Cabdi masoo socdo ee ninkii dhaanta rabow lasoo dhaantee xerta Cabdi.
Waxaa hoteelka lagu kireeyey 50 kun oo dollar kharashka kalana dheeryahay isu geyn 100 kun oo dollar markey ugu yartahay, halka dadkii barakacayaasha ahaa shalay ay Fiiq ku banaan baxayeen, ayakoo gaajo iyo rafaad ka mudaharaadaya. Illaahay waa caadil oo mar cadaalatu way imaan ogowna haddii aad koob biya ah ka cabto xafladaas inaad xoolaha masaakiintaa wax ka cuntay Qore abdirashiid ali shuaa